Wear OS: Ofisialy izao ny kinova Android Wear vaovao Androidsis
Roa andro lasa izay dia nambara fa hanova ny anarana hoe Android Wear i Google. Fa kosa, ny fiambenana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny orinasa no hitranga mampiasa Wear OS kosa. Ity no anarana vaovao amin'ny rafitra fiasa. Natao ofisialy io fanovana io. Ho fanampin'izay, afaka nianatra antsipiriany fanampiny momba an'ity kinova ity izahay.
Toa fanandramana ataon'ny orinasa hanitarana ny tratrany ny fanesorana ny anarana Android. Izany no mahatonga azy ireo miloka tsotra fotsiny amin'ny Wear OS. Ankoatr'izay, ny rafitra rehetra dia hanova ny anarany ary hampiasa Manaova OS 1.0 amin'ny alàlan'ny default. Dingana iray izay ho vita tsy ho ela.
Google dia te hilaza izany amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fanambarana iray ao amin'ny tranonkalany. Ka mba efa fantatry ny mpampiasa rehetra fa tena fanovana izy io ary hitranga izany amin'ny herinandro ho avy. Ary koa, raha manandrana miditra ny rindranasa Android Wear na ny tranokalany ianao, mamindra anao amin'ny vaovao izy ireo. Ka io dia dingana efa natomboka.
Ny anton'ity fanovana ity dia, hoy i Google, tamin'ny 2017, ny ampahatelon'ny mpampiasa Android Wear dia mpampiasa iPhone ihany koa. Ka ny fampidirana ny Wear OS dia mety ho dingana iray mankany amin'ny fampifanarahana bebe kokoa amin'ny telefaona Apple.
Azo antoka fa fanovana izay homen'ny mpampiasa lanjany tsara izany. Na dia afaka hahafantatra bebe kokoa aza isika ao anatin'ny herinandro, Hatramin'ny 22 ka hatramin'ny 27 martsa lasa teo dia notanterahina ny Baselworld, hetsika natokana ho an'ny fiambenana. Noho izany dia azo inoana fa hanome hevitra bebe kokoa momba ny drafitra omena azy amin'ity orinasa ity ny orinasa.
Manantena izahay fa handre antsipiriany bebe kokoa momba ny Wear OS atsy ho atsy.. Fiovana lehibe ho an'ny orinasa izany. Hihaino tsara toy izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Wear OS: Ofisialy ny famerenana Android Wear
[APK] Sintomy sy apetraka izao ny Battlegrounds an'ny Playerunknown. (Fomba OBB)